कसरी गर्ने विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व भुक्तानी - Awajonline Online Newspaper
कसरी गर्ने विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व भुक्तानी
१ लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट
चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म साना–ठूला सबै प्रकारका राजस्व भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिने अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पदभार ग्रहण गर्दा पहिलो निर्णयका रूपमा राजस्व संकलनलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा लैजाने घोषणा गरेका थिए । पहिलो चरणमा परीक्षणका रूपमा १ लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि क्रमशः सबै प्रकारका भुक्तानीलाई यसै प्रणालीबाट सम्भव गराइने सचिव ढुंगानाले जानकारी दिए । यो प्रणालीको सफल कार्यान्वयनपछि राजस्व भुक्तानीमा रहेको झन्झट हट्ने र यसबाट डुइङ बिजनेसमा लाग्ने गरेको मूल्य घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट मुलुकमा लगानीयोग्य वातावरण बन्न सहयोग पुर्‍याउने उनले बताए । भुक्तानीमा जोखिम कम हुने तथा स्वाभाविक राजस्व संकलन हुने भएकाले राजस्व प्रशासनमा यो प्रणालीले नयाँ आयाम थपेको सचिव ढुंगानाको भनाइ छ ।
कसरी गर्ने भुक्तानी ?
नेपाल क्लियरिङ हाउसले बैंकहरूसँग मिलेर बनाएको कनेक्ट आइपिएस नामक प्रणालीमा आबद्ध भएपछि अनलाइनमार्फत आफ्नो बैंक खाताबाट सरकारलाई सीधै ई–पेमेन्ट गर्न सकिनेछ । त्यसका लागि पहिलो चरणमा www.connectips.comमा गई आवश्यक विवरण भर्नुपर्छ । त्यसपछि आफ्नो युजर नेम बनाउन सकिन्छ । सोहीवेला आफ्नो इमेल र मोबाइल नम्बर भेरिफाई गर्न सकिने सुविधा राखिएको छ ।
दोस्रो चरणमा उक्त प्रणालीमा लग इन गरी आफ्नो बैंक खाताको विवरण भर्न सकिनेछ । उक्त विवरणसहितको फारम डाउनलोड गरी परिचयपत्रसहित बैंकबाट खाता भेरिफाई गराउन सकिने नेपाल क्लियरिङ हाउसले जानकारी दिएको छ । यसरी आफ्नो खाता तयार भइसकेपछि नेपाल सरकारको राजस्वडट एफसिजिओडट जिओभीडट एनपी मा लग इन गरी कनेक्ट्स आइपिएसमा जानुपर्छ । उक्त साइटमा भुक्तानी विवरण रुजु गरी भुक्तानी गर्ने बैंक खाता छनोट गरी भुक्तानी गर्न सकिने बताइएको छ ।